Malunga nathi - Ningbo Huayu Network Technology Co. Ltd.
Fumanisa Okuninzi NgoNomi
8 iiseti ezipheleleyo ze
imixholo yokufundisa eveliswe ngokuzimeleyo.
Ukubambelela kwingcinga esisiseko yokutshintshiselana ngokwenkcubeko, ulwimi kuqala, samkela imo esisiseko yootitshala eTshayina, aBafundi kwihlabathi liphela ukuba baqhube imfundiso yamaTshayina.
Ngaphezulu kwabafundi abangama-500 abafunda isiTshayina nathi
Inye-kuthi-kuninzi, ukusebenzisana okusekwe kwiimveliso zokufundisa ezisungulwe ngempumelelo kumazwe amaninzi kwihlabathi liphela kwaye zidunyiswa ngokubanzi ngabafundi baphesheya.
I-1200 yeNomi yaseTshayina ekwi-intanethi iqokelele ngaphezulu kweeyure ezili-12,000 zokufundisa kwi-intanethi.
UNomi unyanzelisa kwizinto ezintsha kwaye wamkela imodeli ye-Intanethi + yezeMfundo ukuze aziphucule rhoqo kwaye aphucule amava omsebenzisi.
Kutheni sifunda isiTshayina ngesiNomi?
Indlela yokufunda eyonwabisayo:Apha, uya kudibana nelona gumbi linomdla kakhulu kwiklasi. Sisebenzisa ukufundisa okusemgangathweni, imidlalo kunye nezinye iindlela zokwenza abantwana bafunde kwaye bathandane nesiTshayina. Iikhosi ezizodwa ukuya kwenye, enye yeeklasi ezine ezincinci, yenza ukuba ukufunda kwabantwana kwahluka ngakumbi.
Iindidi ezininzi zeekhosi: Apha, unokufumana ezona zifundo zifanelekileyo. Nokuba uqala ngaphi na okanye uqhubele phambili eTshayina, unokufumana iikhosi ezilungileyo apha. I-Zero Basic Chinese, ukufunda, ukubhala, ukuthetha, ukuthetha ngomfanekiso, i-HSK, i-AP yamaTshayina ... Kukho iikhosi zemathematics ezibanzi ngakumbi onokuzikhetha.
Ukufunda kwezentlalo: Apha, awungekhe udibane notitshala ohlekisayo, kodwa unokunceda umntwana wakho ukuba afumane iqabane aza kufunda nalo, ukuze ungabi sedwa ekufundeni isiTshayina.
Ootitshala abaninzi:Apha unokufumana zonke iintlobo zootitshala, abahlekisayo, abanomdla, abaguli, abangqongqo nabazimiseleyo ... Akukho sidingo sokukhathazeka ngootitshala abangabaqondiyo abantwana. Ootitshala bethu baseTshayina bonke banamava okufundisa kwamanye amazwe. Uqeqesho olufanelekileyo lokufundisa lwenza ukuba ootitshala bethu babalasele ngakumbi.
Inkonzo yabathengi impendulo yexesha-lokwenyani: Apha, uya kudibana nenkonzo yabathengi enezigulana. Ukuba abafundi okanye abazali bahlangabezana nazo naziphi na iingxaki, ootitshala beenkonzo zabathengi baya kukunceda, ukuze inkqubo yokufunda yomntwana igude ngakumbi, ukuze abazali bazive bekhuselekile ngakumbi.
U-Miss Becky, wase China, unesidanga se-bachelor kwi-International Chinese education. Wayekhe wafundisa izifundo zaseTshayina eyunivesithi kwaye unezakhono ezigqibeleleyo zaseTshayina. Ndineminyaka emalunga ne-4 yamava okufundisa. Ndakhe ndafundisa abafundi baseTshayina eMaldives kwaye ndathatha inxaxheba kwinkqubo yokutshintshiselana ngamaTshayina yezikolo zamanye amazwe eUnited States.
Utitshala weklasi ekhethekileyo
UMnu Li uvela e-China kwaye unesidanga sokuqala. Unamava atyebileyo okufundisa kwaye uyakonwabela ukusebenza nabantwana. Uya kubonelela ngeklasi enomdla kubafundi kwaye abenze bonwabe xa befunda. U-Li uyakwazi ukudibanisa indlela ye-TPR yokufundisa kwi-Intanethi kunye nokunceda abafundi baqonde umxholo. Ulungile ekusebenziseni iziphumo ezibonakalayo, nokuba yeyokwenzela okanye ebambe ibhodi emhlophe, unokusebenzisa iziphawuli ukutsala umdla wabafundi. Uya kubakhuthaza abafundi bakhe ukuba bathethe kwaye basebenzise izivakalisi ezipheleleyo rhoqo kangangoko kunokwenzeka.
UJo uvela e-China kwaye unesidanga se-bachelor kwi-Chinese International Education. UJo uneminyaka emi-4 yamava okufundisa, kubandakanya ukufundisa kwizikolo zamabanga aphantsi nakwizikolo zamabanga aphakamileyo. Akakwazi kulinda ukuba akubone. Abantwana bayakuthanda ukufunda noJo. UJo ujonge phambili ekuboneni abantwana abathandekayo kwiklasi yeNomi. Yiza umjoyine!
sijonge phambili ukudibana nawe kwiklasi yeNomi!